Birthday Wish By CPPH’s Chair Man (June 19/2021) – PVTV Myanmar
Birthday Wish By CPPH’s Chair Man (June 19/2021)
2021-06-19 at 7:46 PM
2021-06-19 at 7:52 PM
မေတ္တာ။ ဂရုဏာ မုဒိတာ တရားရှိသူတို့သာလျှင်ဤအရေးကိုအောင်နိုင်ရာ၏🙏
Teresa Phyo says:
အမေစု ကျန်းမာ၍ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပါစေ ♥️
အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် အောင်ကိုအောင်မည် အောင်မည် 🙏
2021-06-19 at 8:27 PM
ေဒါ် ေအာင်ဆန်းစုကြည် သစ် ေခွးများ၏ဆွဲခြင်းမှအမြန်လွတ်ေမြာက်ပါေစ။ ၇၆မှစ၍အသက်ရာေကျာ်သည်အထိပြည်သူများနှင့်အတူ ကျန်းမာေပျာ်ရွှင် ပါေစ။
We stand with CRPH , For all public.
2021-06-19 at 8:40 PM
2021-06-19 at 8:52 PM
​မေစု ၇၆ ​မွေး​နေ့မှစ၍ ၁၂၀ တိုင်အသက်ရှည်​စေ​သော်
2021-06-19 at 8:57 PM
အမေစု အမြန်ဆုံး လွှတ်မြောက်ပါ​စေခင်ဗျာ.🙏🙏🙏
2021-06-19 at 9:01 PM
ချေးစားနီပိန်းခွေးတွေ့ ဒီနေ့အူချက် ဟား
2021-06-19 at 9:12 PM
ဘဘ ဦးအောင်ကြည်ညွန့် လည်းကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ
We stand with CRPH. WE LOVE OUR LEADERS.
2021-06-20 at 12:05 AM
2021-06-20 at 2:40 AM
May Daw Su and other people be free soon and haveapeaceful future days with their family and people.
2021-06-20 at 4:13 AM
Bily sung says:
2021-06-20 at 2:54 PM
အရိယာလမ္းေလ်ွာက္ေနေသာ အေမစု အသက္ရာေက်ာ္႐ွည္ၿပီး မသူေတာ္မ်ားႏွင့္ ျမန္ျမန္ေဝးကြာ ရပါေစ။
aungnaing soe says:
2021-06-20 at 11:16 PM
PVTV ၏ တော်လှန်ရေးအနုပညာ ကဏ္ဍ (ဆောင်းပါး)…